Home Wararka Shacab badan oo ku dhintay Qarax ay Alshabaab ka fulisay Magaalada Mandheera,...
Shacab badan oo ku dhintay Qarax ay Alshabaab ka fulisay Magaalada Mandheera, Kenya
Wararka laga helayo magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari, Kenya ayaa sheegaya inuu halkaasi maanta ka dhacay Qarax qasaare badan geystay.
13 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 15 kalena way ku dhaawacmeen, kadib markii Gaari Bas ah (matatu) oo ay la socdeen dad rakaab ah uu jiiray walxaha qarxa oo jidka loo geliyay, xilli uu ku socday magaalada Mandheera.
Warbaahinta Kenya ayaa kasoo xigatay Taliyaha booliiska gobolka Waqooyi-Bari Bunei Rono, in la xiray hal qof oo looga shakisan yahay in uu ka dambeeyay weerarka.
Gaariga rakaabka ah ayaa marayay wadada isku xirta Carabiya iyo Mandheera, markii ay ku qarxay Miinada, waxaana gaarya burbur aad xoog badan. Dadka dhintay iyo dhaawaca ayaa loola cararay isbitaalka magaalada Mandheera
Previous articleCiidamo ka tirsan AMISOM oo Dad shacab ah ku dilay Degmada Qoryooley.
Next articleKhasaare ka dhashay dagaal ka dhacay Galguduud
(Q. 2aad) Qaabkee Qoor-Qoor u shirqoolay Kheyre iyo qiyaanadii ka dhacday...
Farmaajo oo shaaciyey in arrinta kusoo korortay doorashada uu kula laabanayo...